Aqoonkaab Astaamaha iyo Fadliga 10 Maalmood ee Ugu Dambeeya Ramadaanka | Aqoonkaab
Astaamaha iyo Fadliga 10 Maalmood ee Ugu Dambeeya Ramadaanka
Jun 25, 2016Arrimaha islaamka
Bisha Ramadan oo ah bisha ugu qiimaha badan 12ka bilood ee sanadka Hijriya ayaa waxey u tahay bil cibaado dhamaan muslimiinta ku nool dunid.
Caano daatay dabadooda la qabtaa, ramadaan wuu dhamaday waxaan la galayaa 10 ugu dambeesay ee ugana ajirka badneed, nabiga iyo asxaabta waxey 10 kaan dambo bixin jireen dadaal eesan bixin 20 kii hore, waxeey ku ictikaafi jireen masjid oo hooy u ahaa 10 kaas habeen.
FADLIGA 10 KA DAMBE IYO LAYLATUL QADRI GA:
10 kaan dambo wuu ka fadli badan yahay 20 kii hore sida Qur’aanka iyo axaadiista Nabi Muxamaed Nabadgelyo iyo Naxariis korkiisa ha ahaatee ay muslimiintu farayaan iney laba laabaan cibaadadooda., waayo waxaa ku jira habeen ka kheyr badan 1000 bil oo u dhiganta 83 sano camal la qabto.
Habeenkaa waxaa uu ku dhex qarsoon yahay tobanka dambe mana lahan waqti cayiman ama la ogyahay laakiin waxaa ay culimadu sheegaan in habeenada witirka ah uu midood soo galo sida, 21-23-25-27 iyo 29 ka.
Nabigeena waxaa ka sugnaaday in uu yiri:” Qofkii u dhameeya walaalkiis dan uu leeyahay ayaa uga kheyr badan inuu ictikaafo 10 sano, Qofkii maalin Ilaah dartiis masjidka ugu nagaadana “Ictikaafa” Ilaaheey asaga iyo Naar wuxuu kala fogeeyaa saddex masaafo oo u dhiganta inta u dhaxeysa Qorax ka soo baxa iyo qorax u dhaca“(Xadiiska:3669/waxaa soo saaray Al-Bayhaqi).
Waa fursad qaali ah uu ilaah dhabaha kuugu xaaray iyadoo Jannadii oo dhan al-baabada loo furay, Naartana al-baabada loo xiray, Shaydaanadiina laga Xabisay. Habeenadaa waxaa uu Ilaah ka dhigay 10ka ugu dambeeya adigoo Nafsadaada layliyey oo ay cibaadadii la qabsatay 20ka ugu horeeya ee bisha iyana waa fursad qaali ah ay haboon tahay in laga faa’iideysto.
MAXAY TAHAY SABABTA LOOGU BIXIYEY LEYLATU-L QADRI GA?.
Sabata waxaa lagu sheegay 3 qeybood oo kala ah:
1. In Ilaah qadarayo habeenkaa arzaaqda, cimriga, dhacdooyinka dhamman ilaa sannadka kale oo malaa’igtuna ay qorayaan. 2. In habeenkaa leeyahay qadarin aad u weyn iyo sharaf maadaama Quraanka kariimka la soo dejiyey oo ay malaa’igtu soo degeyso, barakada iyo naxriista iyo dembi dhaafka Allah uu soo degayo. 3. In qofkii cibaado u istaaga oo nooleeya habeenkaa ay siineeyso qadarin weyn iyo sharaf badan Allah xagiisa oo uusan mar hore ku lahaan jirin.
Imam Al Qurdhubi wuxuu yiri: “Ilaah wuxuu ku sifeeyey habeenkaa inay barakeysan tahay” maxaa yeelay waxaa Ilaah ku soo dejinayaa barakooyin, naxriis, iyo ajar badan adoomankiisa korkooda
Sidaa daraadeed waxaa haboon inaan la nimaado towbad keen dhab ah waqtiga inta dhiman si aan uga faa’iideysano kheyrkaas, qofkii manta lagu yiraahdo 10ka habeen ee ugu dambeeya Ramadan habeen kiiba waxaad heleysaa maal aduunyo intuu la ikaadaba, run ahaantii ma hurdeen, marka side ku hurdeysaa iyadoo laguu balan qaaday Noolol waarta iyo Jannaddii Firdowsa iyo ajarka 83sano iyo dheeraad oo aad kula timid cibaado wanaagsan iyo samafal.
ASTAAMAHA LAGU GARTO LEYLATUL-QADRI GA:
Waxaa lagu gartaa in subaxda habeenkaa ay qoraxdu soo baxeyso iyadoon wax ileys ah laheyn.Mar haddii calaamadaha lagu garanaayo ay yihiin kuwo dhaca markii babeenka dhamaado sida calaamadaan iyo in habeenkaa ay Dameeraha iyo Eeyuhu ciyin. Ibnul Jowzi wuxuu yiri: waxaa loo qariyey habeenka sharafka Laylat-ulqadriga in dadaalka adoomanka Allaah aad u bato iyagoo ku dadaalaya inay haleelaan habeenka oo ay ajar badan helaan, sida loo qariyey saacada ducada la aqbalaayo ee ku jirto maalin jumcaha ah, saacadda habeenka qeybihiisa dambe la gu qariyey iyo salaadda dhexe oo salaadaha shanata ah lagu qariyey intaas oo dhan wuxuu ilaah u sameeyey xikmad.
MAXAAN KU DUCEYSTAA HADAAN LA KULMO LAYLATUL-QADRI GA ?
Caisha RC ayaa waydiisey Rasuulka SCW: “Rasuul allow hadaan haleelo oo aan ogaado iney tahey laylatul qadriga maxaan dhahaa oo ku duceystaa?”
Markaa baa Rasuulka scw ku yiri: “waxaad dhehdaa; allahuma innaka cafuwun tuxibul cafwa facfu cannii!!” Allow waxaa tahey danbi dhaafe, waadna jeceshahey danbi dhaafka, ee ii danbi dhaaf!!
Waxaan Ilaah ka baryayaa inuu dambigeena dhaafo, jannadana inagu kulmiyo, inaga mid dhigo kuwa ka gala albaabga gaarka ah ee dadka sooma lagu abaal gudo ee “Rayaan”
Qalinkii walaalkiin: Haafid Elmi
Previous PostSchools level 1 [Oxford Read and Discover] Next PostGabay qaab dhismeedka lafaha iyo sida ay iskugu xidhan yihiin (Skeletal system)